“Xilli ciyaareed xun marna ma bedeli doono Real Madrid” – Marcelo oo hadlay kaddib guuldaradii Real Betis – Gool FM
(La Liga) 19 Maajo 2019. Ciyaaryahanka kooxda Real Madrid ee Marcelo ayaa muujiyay sida uu kaga xun yahay in xilli ciyaareedkan ay kaga dhameystaan guuldaro horyaalka La Liga, kaddib markii ay guuldaro 2-0 ah kala kulmeen kooxda Real Betis oo marti u ahayd.
Wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Marcelo kaddib kulankoodii ugu dambeeyay horyaalka La Liga ay guuldarada kala kulmeen Real Betis waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Waxaan xili ciyaareedkan kaga bilaabanay si xun, waxaana ku dhameysanay si xun, wuxuu ahaa xili ciyaareed aad u adag, waxay ahayd mid ka mid ah wakhtiyadii iigu xumaa aniga ahaan”.
“Waxaan sameynay wax walba ee suurtogal ah, waxaan u dagaalanay isla markaana aan u tababaranay si aan wax u xalino, balse xili ciyaareedka wuxuu ahaa mid aad u dheer isla markaana aad u adag, maanta waxaa bilaaban doona xili ciyaareed cusub”.
“Taageerayaasha maalin weey kaa soo hor jeedaan, maalina way kugu faraxsan yihiin, waxaan u arkaa in hadii aan la kulmi laheyn wax dhaleeceen ah, ma gaari lahayn heerka aan hada gaaray, waxaana u maleenayaa inay arintan tahay qaabka ay nagu dhiiragalinayaan jamaahiirta”.
“Real Madrid marnaba kama harin tartanka, waxaan dagaalanay ilaa iyo dhamaadka, waxaan sidoo kale u dagaalanay wax walba, xilli ciyaareed xun ma bedeli doono Real Madrid, waa inaan wax ka badalnaa xaaladan, waana ku kalsoonahay inaan sameyn doono”.
“Ciyaartoyda waxay yimaadaan kooxda, marka ay timaadana wey ka tagaan, qaarkood waxay wali heystaan heshiis, waxaan arki doonaa waxa dhaca, dad badan ayaa taariikh ka sameeyay halkan”.
Shaxda rasmiga ah kulanka La Liga ee kooxaha Eibar Vs Barcelona